လော်ဗီမြ နှင့် Commie ကြောင် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Aha! Jokes, Satire » လော်ဗီမြ နှင့် Commie ကြောင်	20
လော်ဗီမြ နှင့် Commie ကြောင်
Posted by ဦးကြောင်ကြီး on Sep 8, 2015 in Aha! Jokes, Satire | 20 comments
ဟဲ့ကောင် ငကြောင်ကြီး.. နင့်ကို ယီးဗဲ။ မနက်စောစော စီးစီး အမြှားဓဂါ မေတ္တာပို့ ရွတ်ဖတ်သရဇ္ဇယ်ချိန်၊ သူဒေါ်ဂေါင်းတြား ပွားမြှားဂျိန် အရုတ်တ အနှပ်တ ဆဲဆိုသံ ထွက်ပေါ်လာအိ။ ခမြှာ… အမ်တီလော်ဗီမြ.. အနော့်မှာ ဘာအပြစ် ရှိလို့လဲ။ ကြောင်ကြီး တအံ့တဩ ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်သွားမိသည်။ ဂေဇက်ရွာမှာ ဒီလိုမျိုးလည်း ရှိသေးသဂိုး။ အေဗောင်ကြေးကြီး နင့်လှုပ်ရပ်တွေ လျက်တန်းကလျက်.. ကြောင်ကြီး ယောင်ရမ်း၍ လျှာသပ်မိသွား၏။ ဆိတ်အေးအေးထား လော်ဘီမြ… ဝံလေ ထွက်လေ မှန်မှန်ရှု.. ဟုတ်ပီလား၊ ဆိတ်ထဲက ၁..၂.. ၃..၄ ရွတ်.. ပီးမှ ပြောချဉ်တာပြော.. အနော်စောင့်နေမဲ။ ပြောလေ လော်ဘီမြ ပိုဒေါသထွက်လေ.. ဒေါသထွက်သီမှ ဆွေ့ဆွေ့ဗင် ခုန်နေပီ။
ဒီကိစ္စ ကြောင်ကြီး လွန်တယ်၊ အထည်ချုပ် ဆတ်ယုန်သူဌေး ခိုနီဒုံမှ ဝံဖဲ့၏။ မင်းအနေနဲ့ အဲလို မပြောသင့်ဗူး.. မြက ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေး ပြောတာ၊ နင်သာ နင်ပဲငဆ ပျံပက်လို့ ဖြစ်တာ။ ကြောင်ကြီး ဆွံ့အသွားခါ…. ဟုတ်ပါတယ် အနော်ယိုင်းပျမိပါတယ်။ အေးဟုတ်တယ် နင့်လို ဘုရားမဲ့ တျားမဲ့ သပ်တဝှာ မှုတ်ဖူး.. ဟိုက်.. လှည့်ကြည့်လိုက်တော့…. ထမီတပြင်ပြင်နှင့် လူမိုက်လှံခင်ဇော်။။ လူလိုရင် ပြောကွ ဆိုဂါ တဖက်ပိတ်မဲသွပ်၊ ခြိမ်းပုတီး နှင့် ကွင်သဘုံအတုတို့ လက်သီးတပြင်ပြင်နှင့် ဆွမ်းဂျီလောင်းယံအသင့်။ လေမားမားကမူ လာချောင်းကြည့်သူများကို တီဗွီထဲက အသံတွေပါရှင်.. ဘာမှမဟုတ် စိုအိ။ ဗိုဂဒေါ်သာဂူး၊ ပီအာရ်ပေါဟိတ်မင်းခံ့ကြော်၊ သပ်ချောင်ချုိုဂျီး နှင့် ဖက်ဆစ်ဖြိုးဂျီးတို့ကား အေးအေးလူလူယပ်ခပ် ကြည့်နေသည်။ မားနိုဂျီးကမူ ဂျူ နိုလေးအား ကားပေါ်တင်လျက် ဃလိုင်စင်လေး တကိုင်ကိုင်နှင့် ကားဖြင့် တက်ကြိတ်ပေးရမလား ပဏ္ဏာလှုပ်အိ။ ကြောင်ကြီးလေး ခမြှာမှာ မျက်လုံးလေး ကလယ်ကလယ်… ငါ ဘာများ မှားသွားလို့ရဲ…အဟင့်။
အားလုံး ပြီးပြီဆိုမှ ကြောင်ကြီး ခြေလက် လေးဖက်စလုံး ကြိုးတုပ် တုတ်လျှိုလျက် ရွာတွင်းသို့ ခေါ်ဆောင်သွားကြသည်။ ဟေ့ ဒီမှာကြည့်ထားဂျ.. ငါ့ကို အာခံသူ ဒီလိုဖြစ်မည်။ တရွာလုံး တုပ်တုပ်မျှ မလှုပ်ဝံ့.. ကြောင်ကြီးဘော်ဘော်နူးဗာဂီဂါး အိပ်လျှာထဲ ဒိုက်ထိုးလွန်သဖြင့် မထနိုင်ပြီ.. ကျားမဝေါင်းမှာမူ ဓါးဝယ်သား ဆားယံဆိုဂါ တခါမှ မစီးဖူးသော လိင်ပျံပေါ် ရောက်နေအိ။ ကြံရှိသော ဆြာဂျီး ဆျာမများအားလုံး ဘေးကင်းရန်ကွာ ပျပ်ဂဒိန်ကိစ္စသာ လုံးပန်းကြတော့ သည်။ ရွာနိုင်ငံရေးဂါး လော်ဘီမြ လာဘ်ထဲ ရောက်ခြေပီ။ အတိုက်အခံ ကထူးဆမ်းပင်လျင် ဒီတခေါက်တော့ပါတီကျိ မဲပေးပါမြည် လေပြေထိုးအိ။ ရှစ်ပူးများ မပါ၍ ရွာထိပ်မှ ဆဲဆိုဖူးသူ ဆော်ဒီပျံ အူးမွပ်ခဲဂါး ဆိုက်အသစ်ဆိုဂါ မော်နီတာနှင့် မြှက်နှာ မခွာဒေါ့၊ ထိုဆိုက်ကား ပွန်းဆိုက်တည်း..။ အူးမျိုးနှင့်အူးမိုက်ကား ကယ်ဖို့ဝေးစွ.. မျက်နှာလိုမြက်နျှတုတ်ပင် ဝံထမ်းပေးကြသည်။ တမတ် တမတ်နှင့် စစ်တမတ်သားလောက်ပင် ကတိမတည်သော လူဂျီးမြှားဗေတီး။
ထိုသို့ လော်ဘီမြအား တရွာလုံး ဖိန့်ဖိန့်တုံအောင် ကြောက်နေဂျိန်ဝယ် မေခလာ နှပ်သမီးအသွင် ကူညီစောင့်ရှောက်သူမှာ မျှော်လင့် မထားသည့် တိုင်းရင်းသူလေး ကွင်မကင်းကောင် နှင့် ကခြင်မလုလု တို့ဖြစ်သည်။ ကြောင်ကြီးအား မြင်းမြင်းခြင်း ကျားကျားခြင်း မေတ္တာသပ်ဝံမိဂျအိ။ ကြောင် အစာမကျွေးရ ဆိုသဖြင့် ၎င်းတို့ကိုယ်ဒွင် ထောပတ်၊ပျားရည်၊ကြက်ဥ၊ဒိန်ချဉ် စသည်တို့ လိမ်းကျံလျက် အစောင့် ပါးဂွက်အာဏှာသား တလှုပ်သဗုံ ဝှီဂါကြေးမုံဂျီး အလစ်တွင် ကြောင်သဘောယှိ အလှူ ဒါနှ ပြု ဂျသီ။ ကြောင်ကြီးအဖို့ ရွေးဆရာ လန်းမရှိ.. မျက်စေ့စုံမိတ်လျက် မရွံမလျှာ အဟာရ မပြတ်ရေး သည်းခံတီးရလေ၏။ ကာလာသားသမီး အပေါင်း တွေးနေမြည့် ဟိုဆိတ်ကား လားလားမြှ မဝံခြေ.. ပလပ် ပလပ်.. အဟုတ် တဂယ် ဖျားစူးတီး။
ကြောင်လျှာ မပြောင်ပါ အမှောင်မှာ ရောင်ဖြာ
လော်ဘီမြမှာ အကြံအောင်ပြီဆိုဂါ လွန်စွာပျော်နေ၏။ ဟိ.. ငါတော့သူဂေါင်းပြု ခံရဒေါ့မယ်… အနည်းဆုံးဒေါ့ အင်ဃလှံသန်အမှက် ဖစ်မှာ…။ ဟေ့ ဒီအချိန်မှာ တသွေးတသံတမိန့်ကွ၊ စောဒက မတက်နဲ့.. ဇက်ပြုတ်သွားမယ်.. ဘာမှက်သလဲ။ ဓါးကြိမ်း ကြိမ်းလိုက်.. ရော့ ပဲကြီးလှော်စား.. ရေတွင်းက ရေခပ်သောက်.. ပီးရင် ငါ့စဂါး နားထောင်။ ငါ့ ဆန့်ကြင်ရင် ကူမြူ နစ် ဘုရားမဲ့ အဖျက်သမား အချောင်သမား…။ တေဒါတောင် ကြောင်တေ ဝက်တေ တေရမည်။ ခြိမ်းလိုက် ချောက်လိုက် ဟိန်းလိုက် ဟောက်လိုက်နှင့် အမိုက်တိမ်သလ္လာ ဖုံးလွှမ်းနေသလောက် ထမင်းဟေ့ ဟင်းမေ့ သာယာနေကာ နတ်မင်းစည်းစိမ် ခံစားနေသူကဒေါ့ အစာဖြတ်ရေဖြတ် ခံထားရသည်ဆိုသိ အာချောင် လျှာချောင် ကွန်မြူ ကြောင် ဖြစ်ပေဒေါ့သဒီး…။
ဇာတ်လမ်းပီးပါပီ။ (ဝံခန်ချက်။။။ အီစာကို လျှာသပ်လျက် ယေးသီ။)
kai says: အာဏာလေး ပြား၅၀လောက်.. ရပါစေဦး ကကြောင်ရယ်…။
တော်ကြာ.. တောမီးထဲရောပါ.. ကြောင်ကင်ဖြစ်သွားမှဖြစ်..။
ကင်န်ပိန်း စတက်တဂျီအရဆို.. အဲလိုဝေေ၀၀ါးတွေလည်းရောလွှတ်ရတာပ…။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12396
ဇီဇီခင်ဇော် says: ရန်စကားပြောတာတော့ မဟုတ်..!!
၆) ရွေးကော်မှူးဆိုတာလည်းး သူတို့ ဘက် ပင်းမယ့် ဘောင်းဘီချွတ်ကောင်ကြီး
၁၀) ဘာသာရေးနဲ့ လည်း လှည့်ပြီးသွေးခွဲထားသေးတယ်
ဒီ ၁၀ ချက် က သိသိကြီးနဲ့ ဖွတ်တွေကို handicap ပေးးထားးရတာ..
ဒါတောင် အမေ စု ကို အဝေဖန် မခံနိုင်ဘူးလာမပြောနဲ့..!
တန်းတူ ယှဉ်ရတာ မဟုတ်တဲ့ပွဲ မှာ ဘာမှ သာတူညီမျှ လာဝေဖန်မပြနဲ့..!
အဘ ဖက် စောင်းနင်းတွေက ကြားနေ နာမည်ယူပြောတာတော့ မခံနိုင်လို့..!
မျှတူ ဝေဖန်ချင်ရင်တော့ အဘ တွေ အကုန် အနှစ် ၂၀ အကျယ်ချုပ်နဲ့နေပြီးမှ လာဝေဖန်..!!
ဒါ က အမေ စု ကို အဘတွေ မှီနိုင်မယ့် တစ်ခုတည်းသော နည်းမို့ ပြောတာ..
ပညာ အရည်အချင်း အတွက်တော့ အင်္ဂလိပ်စာ မီးးနင်းးတွေ မကျက်ခိုင်းသေးဘူးနော်..!!
Otherwise အမေစု လုပ်ပိုင်ခွင့် အပြည့်ရတဲ့ အရပ်သားး အစိုးး ဖြစ်ပြီးး အနှစ် ၂၀ စောင့်ပြီးးမှ သာ ဝေဖန်ကြနော် သလားးး
@QUIL@ says: ကျုပ်တော့ ပါတီတကာ့ ပါတီမှာ
အော်ဂီ ပါတီပဲ တအားကြိုက်ဒဲ့ယ့်…
အောင် မိုးသူ says: ထိုကြောင်အား အရှင်လတ်လတ် အရေခွံစုပ်ကာ ဖင်တံစို့ထိုး မီးကင်ရန် သင့်ချေပြီ။
တောင်ပေါ်သား says: ( အူးမျိုးနှင့်အူးမိုက်ကား ကယ်ဖို့ဝေးစွ.. မျက်နှာလိုမြက်နျှတုတ်ပင် ဝံထမ်းပေးကြသည်။ )
ကျုပ်ဖာသာ အေးအေးနေပါရစေဗျာ ၊ မွေးထားတဲ့ သား စာကောင်းကောင်းလိုက်နိူင်ဖို့ ၊
မွေးထားတဲ့ ငါးလေးတွေ အချိန်မှန်မှန် အစာကျွေးဖို့ ၊ မမွေးပဲ ရောက်လာတဲ့ ကြွက် ၂ ကောင်ကို သုတ်သင်ဖို့ ၊
အဲဒါတွေဦးစားပေးနေရလို့ ဘီယာတောင် နပ်မမှန်ချင် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 3276
pooch says: အဲ့ကြောင်ကို တောက်တောက်စင်း နုတ်နုတ်စင်းပြီးရင် ဒလိမ့်တုံးနဲ့ လိမ့် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1991
CharTooLan says: ကျနော်က ရုပ်ရှင်ထဲကရဲတွေလို ရွှေရင်ထေးထေး အဲမွှားလို့ ရွှေရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့ အသေကောက်ဖို့စောင့်နေတာဘာ :P
တိမ်မည်း says: .သို့ 
.ပေါက်ကရပြောကြောင်ကြီး ထံသို့ ပေးစာ…..
.အသင်ကြောင်ကြီးသည်ရွာထဲတွင် ပေါက်ကရပြောခြင်း… တပါးသူများအာ တည့်ရိုက်သောလည်းကောင်း သွယ်ဝှိုက်သောလည်းကောင်း စော်ကားခြင်း အမျိုးမျိုးပေးသည်ကိုတွေ့ရသည်…..
.ထို့ သဖြင့် သင့်အား ရွာပြင်သို့ နှင်ထုတ်ရင် အလျင်းဆန္ဒရှိသော်လည်း…. ဒီမိုရွာအမည်အား မပြတ်စေသောအလို့ ငှာ… အတိုက်အခံဆိုတာ ရှိကောင်းရဲ့ဟု သဘောပိုက်ပီး သင့်အား ညင်သာစွာ သတိပေးဆိုလိုက်သည်….
.ယနေ့ အချိန်မှအစ ရွာသူားအပေါင်းအား တည့်ရိုက်သော်လည်းကောင်း သွယ်ဝှိုက်သော်လည်းကောင်း.. စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေမှူ ပြုလုပ်လျင် ရွာသူား အများစုက သင့်အား ကျွတ်ကျွတ်ကင်သောမီးခဲပေါ်တွင် အရွေခွံစုတ် အရက်စိမ်ကာ အစိင်းကင်စားရန် အာသီသရှိကြောင်း အကြောင်းကြားအပ်ပါသည်…..
Ma Ma says: ဒီမိုရမှ ဒီကြောင်ကို အရေဆုတ် ကောင်လုံးကင် မီးပုံပွဲလုပ်ပြီး အောင်ပွဲခံရမယ်။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8068
မြစပဲရိုး says: အေးပါ ကွန်နစ် ကြောင်ကြောင် မောင်မောင်ကြွပ် ရယ်။
နိ ကို ဘာမှ ပြန်မပြောနိုင်သေး ဝူး။
NLD က အမတ်လောင်း ပညာတတ် မိန်းကလေး တွေ ချောမှ ချော။
.တွေ့ပြီးပြီလား ကွဲ့။ အားရလှသကွယ်။
ဒါမျိုး တွေ မြင်လို့ သူက ကြိုပြောထားတာ ကိုး။
လူကို မကြည့်ကြဖို့။ အခုမှ ရိပ်မိ တော့တယ်။
ဟို အစိတ်သား တောင် ကျိတ်ဝမ်းသာ နေမလားမသိ။
လွှတ်တော်ထဲ ငိုက်ဖို့ အကြောင်း မရှိတော့ ဆိုပြီး။
မြစပဲရိုး says: တစ်ချို့များ ပခုက္ကူ ပြောင်းကြဖို့ ပြင်နေကြလေရဲ့။ :-))))
kai says: ဆံနီ ဆံကြောင်များ…
ပုဆိန်ရိုးများ… လို့.. မပြောလိုပါ… မပြောလိုပါ..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 9265
ဦးကြောင်ကြီး says: ပေါင်အမှတ် မိကွန်ထောတော့ ဂွတ်သဗြ.. အကိတ်ကြီး… ဂွိ ဂွိ။
.ကျောင်းတက် ခေါင်းလောင်းသဏ်…
Ma Ma says: https://www.facebook.com/pyonekathynaingpolitician?pnref=story
ကလောကို ပြောင်းနေချင်စိတ်ပေါက်သွားမယ်။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 14459
kai says: အသက်.. ၄၂… အိမ်ထောင်ရှိပုံမရ…။
အင်း… မြန်မာပြည်အမျိုးသမီးထုဘ၀.. ထင်ဟတ်နေ..။
ဂျက်စပဲရိုး says: အပေါင် ပြန် ပြီး မဲ ပေးမှဘာာာား)
may july says: ကြောင် ဘာသာစကားကို ခုမှ သင်ယူနေရသလိုပဲ …
တော်တော် ဖတ်နေရတယ် .. မုန်းထှာ အေ ..
မင်း ခန့် ကျော် says: အီးမဲထဲ မဲမြတော့ပါ။
Novy says: မားနိုဂျီးကမူ ဂျူ နိုလေးအား ကားပေါ်တင်လျက် ဃလိုင်စင်လေး တကိုင်ကိုင်နှင့် ကားဖြင့် တက်ကြိတ်ပေးရမလား ပဏ္ဏာလှုပ်အိ။
ကြောင်ကြီးကို ကွန်တိန်နာကားနဲ့ကိုယ်တိုင်မောင်းပြီ ကြိတ်ခြင်ပါသောကြောင့် အမျိုးသမီးများ ငလိုင်စင်ရ၇ှိေ၇း ဆက်လက်ဆွေးနွေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း
Wow says: လူပဲကျိကျိ မူပဲကျိကျိ ပညာပဲကျိကျိ စမ်းချင်တဲ့ဘက်ကစမ်း…. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike LeaveaComment Cancel replyYou must be logged in to postacomment.	My Points	You need to be logged in to view your points.